အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှု: Vandelay အသံတင်ပို့မှုနှင့်အတူသတ်မှတ်မည်အပေါ် Lectrosonics
ရော်ဂျာနှင့် Big စက်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းကြေညာ
TSL ကုန်ပစ္စည်းများ SET ကုန်စည်ပြပွဲ 2019 မှာနောက်ဆုံးအသံစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်အသံလွှင့်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် Solutions Presents
Home » သတင်း » ဂယ်ရီ Rotondelli 33-တစ်နှစ်တာအလုပ်ရှာဖွေရေးပြီးနောက် Vitec ထုတ်လုပ်မှု Solutions '' Vinten အမှတ်တံဆိပ်ကနေအနားယူ
ဂယ်ရီ Rotondelli 33-တစ်နှစ်တာအလုပ်ရှာဖွေရေးပြီးနောက် Vitec ထုတ်လုပ်မှု Solutions '' Vinten အမှတ်တံဆိပ်ကနေအနားယူ
ဇန်နဝါရီလ 7, 2019 - ST Edmund, ဗြိတိန်သင်ျဂွိုဟျ - Vitec Group မှယနေ့ဂယ်ရီ Rotondelli, Vinten အလိုအလျောက်များအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာအရောင်းဒါရိုက်တာ၏အငြိမ်းစားကြေညာခဲ့သည်။ Rotondelli ယင်းနှင့်အတူ 26 နှစ်ပေါင်းအပါအဝင်ထက်ပိုဆယ်စုနှစ်သုံးခု, spanning ယင်းထုတ်လွှင့်စက်ရုပ်နှင့်အလိုအလျောက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ဦး Illustrious အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမည့်အကြောင်းအားတက်သရောပြောခဲ့သည်ထားပါတယ် Vitec Group ၏ Vinten အမှတ်တံဆိပ်။
"ဂယ်ရီနီးပါး 30 နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်အဓိကခဲ့, သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ Vinten အလိုအလျောက်နဲ့စက်ရုပ်ထုတ်ကုန်နဲ့ဆက်စပ်မျက်နှာနှင့်နာမကိုအမှီဖြစ်လာသည်။ သူကြားဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရေးများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်နဲ့သူ့အခွက်တဆယ်ပေးထားရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှင့်အပျနှံလွန်စွာချွတ်ပေးဆောင်ကြပါပြီ, သူသည်တစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် Vinten ထူထောင်အတွက်ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကထားပါတယ် "ဟုပေါလု Dudeck မှာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအရောင်း, အမေရိကတိုက်ကပြောပါတယ် Vitec ထုတ်လုပ်မှု Solutions ။ "ကျနော်တို့ကဂယ်ရီရဲ့ကျက်သရေနှင့်ကျေးလက်လွတ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးအများစုကျနော်တို့ကုမ္ပဏီအားမိမိခက်ခဲအလုပ်နှင့်အပျနှံလက်လွတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ bittersweet ရဲ့, ဒါပေမယ့်သူကသစ်ကို Adventures အပေါ်ကြာမြင့်သကဲ့သို့ငါတို့သည်သူ့ကိုအားလုံးအကောင်းဆုံးကိုအလိုရှိ၏။ "
Rotondelli TSM, ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းထုတ်လုပ်မှုများအတွက်စက်ရုပ်ကင်မရာစနစ်များ၏ဝန်ကြီးချုပ်ကိုအမေရိကန်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာမှသွားမယ့်ကုမ္ပဏီအတွက်အမျိုးသားရေးအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ် 1985 အတွက်ထုတ်လွှင့်စက်ရုပ်၌သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ခဲ့သည်။ Vinten 1993 အတွက် TSM ဝယ်ယူပြီးနောက်သူအမျိုးသားရေးအရောင်းမန်နေဂျာစက်ရုပ်အရောင်းဒါရိုက်တာနှင့်ချက်ချင်းများနှင့်စက်ရုပ်များနှင့်ချက်ချင်းများအတွက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမန်နေဂျာအပါအဝင်အခန်းကဏ္ဍအမှုဆောင်, ကုမ္ပဏီရဲ့အရောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကမှတဆင့်ကြရပြီ။ သူ 2017 အတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရောင်းအား၏ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်လာခဲ့သည်။
"ဒီခရီးစတင်နေ့ကိုမှ, ငါဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်အများအပြားမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လူများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အများဆုံးလေးစားဖွယ်ကုမ္ပဏီများနှင့်ဖောက်သည်အချို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကံကောင်းခဲ့ကြပြီ။ ငါသည်ငါ့ဒုတိယမိသားစုအဖြစ်မှတ်ဤမျှလောက်များစွာသောအဘယ်သူကို၏, ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ရိုသေလေးစားမှုနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးတန်ဖိုးထားနှင့်စီးပွားရေးအသိုင်းအဝုိင်း, "Rotondelli ကဆိုသည်။ "အနားယူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလွယ်ကူသောတဦးတည်းမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ငါ Vinten ထုတ်လွှင့်စက်ရုပ်များအတွက်ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်အောင်ကစားင့်အခန်းကဏ္ဍကိုခံစားကြပါပြီ။ ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အပျနှံ Vitec Group မှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ကျော်လွန်. မဆိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နှိုင်းယှဉ်၏။ "
အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များ Vitec Group နှင့်၎င်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှာရရှိနိုင် www.vitecgroup.com.
အဆိုပါ၏တစ်ဦးကလျှပ်တစ်ပြက် Vitec Group မှ plc
Vitec အဆိုပါအစာရှောင်ခြင်းရွေ့လျားခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာ "ပုံရိပ်ဖမ်းယူခြင်းနဲ့ content ဖန်ဆင်းခြင်း" စျေးကွက်မှပရီမီယံ branded ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများတစ်ဦးဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါတယ်။
Vitec'' s ကိုဖောက်သည်ထုတ်လွှင့်, လွတ်လပ်သောအကြောင်းအရာဖန်တီးသူ, ဓာတ်ပုံဆရာများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, ငါတို့လှုပ်ရှားမှုများပါဝင်ပါဝင်သည်:, ကင်မရာအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ, စက်ရုပ်ကင်မရာစနစ်များ, prompters တပ်ဆင်ထား, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကင်မရာကိုအထောက်အကူအပါအဝင်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏ဖြန့်ဖြူးအလင်းအိမ် LED, မိုဘိုင်းပါဝါ , မော်နီတာ, အိတ်များနှင့်ဆူညံသံလျှော့ချရေးပစ္စည်းကိရိယာများ။
ကျနော်တို့ 1,700 ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိကမ္ဘာတစ်လွှား 11 လူတွေကပတ်ပတ်လည် employ သုံးယောက်ရုံးခွဲများအတွက်စည်းရုံးနေကြတယ်: Imaging က Solutions, ထုတ်လုပ်မှု Solutions နှင့်ကို Creative Solutions ။
အဆိုပါ Vitec Group မှ plc £ 2017 သန်း၏ 378.1 ပြုပြင်ဝင်ငွေ * နှင့်အတူလန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်နှင့်ရပ်စဲစစ်ဆင်ရေးကနေ * အခွန်ဝန်ကြီးဌာန
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/TheVitecGroup/190107VitecGroup.docx
ဓါတ်ပုံများဖို့ Link ကို:www.wallstcom.com/TheVitecGroup/VitecGroup-GaryRotondelli.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: ဂယ်ရီ Rotondelli အနားယူအခမ်းအနားမှာမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူး
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/tweet?text=Gary%20Rotondelli%20Retires%20from%[အီးမေးလျ protected]%20Vitec%20Production%20Solutions%27%20Vinten%20Brand%20After%2033-Year%20Career%20-%20http://bit.ly/2RiG1jP
33-တစ်နှစ်တာအလုပ်ရှာဖွေရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂယ်ရီ Rotondelli isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော ဖယ်ရှားခံရ လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Vinten Vitec ထုတ်လုပ်မှု Solutions	2019-01-07
ယခင်: audio အင်ဂျင်နီယာချုပ်
နောက်တစ်ခု: Samsung ကတီဗီ Plus အား Linear တိုက်ရိုက်လွှဝန်ဆောင်မှုအပေါ် US မှာဝိပဿနာကို TV မိတ်ဆက် Linear Channel ကို